Mukati meFP Nyaya • Zivo SUCCESS
Iyo podcast inoongorora ruzivo rwekuronga mhuri chirongwa.
Takafambira mberi zvikuru mumakore gumi apfuura kufambisira mberi zvirongwa zvekuronga mhuri, kuita zvirongwa zvakasiyana, uye kuwedzera nhaurirano pamusoro pemari yekuronga mhuri mukati mehurongwa hwekuchengetedza hutano kuti dzisangane nevakadzi nevasikana, vakaroorana, nemhuri. Asi basa rakawanda richiri kufanira kuitwa. Kudzidza nzira dzinoshanda dzekuvandudza zvirongwa zvekuronga mhuri zvinowanzoitika munhaurirano dzemazuva ese nevezera rako nevaunoshanda navo.
Tora kapu yekofi kana tii uye uteerere pakutaura kwechokwadi nenyanzvi dzechirongwa chekuronga mhuri pasi rose sezvavanogovana zvashanda mumamiriro avo — uye zvokudzivisa — mune yedu podcast series, Mukati meFP Nyaya.
Pane nyaya dzakawanda dzinonakidza uye maonero ekunzwa mundima yekuronga mhuri nehutano hwekubereka. Mwaka wega wega, tichanyura mumibvunzo inotsikirira uye nekuongorora nzira itsva nemhinduro, yakanangana nerimwe dingindira rakasiyana.
Parizvino ine Season 3: Kubatanidza Gender muKuronga Mhuri
Chikamu 3: Kubatanidzwa kweMurume muKuronga Mhuri
Muchikamu chino, tichakurukura kubatanidza varume nevakomana mukuronga mhuri nezvirongwa zvehutano hwekubereka. Tichataura nevaenzi kubva kwakasiyana marongero nezve: zvinorevei izvi; mazano ekushandisa izvi; uye mazano ekuti tingashanda sei nevarume kutsigira kuzvimirira kwevakadzi pakuzvara.
Unoda kuverenga uchiteerera? Verenga zvinyorwa mukati Chirungu kana chiFrench (inouya).
Chikamu 2: Kushungurudzwa kwevanhukadzi nekuronga mhuri
Ichi chikamu chinoongorora kuti mhirizhonga kuvanhukadzi — yakadimburirwa seGBV — inopindirana sei nekuronga mhuri uye hutano hwekuzvara.. Vaenzi vedu vanoratidzwa vanozogovana zvavakasangana nazvo uye nekupa nhungamiro nemakurudziro ekuti tingagadzirise sei GBV muzvirongwa zvedu zvekuronga mhuri..
Unoda kuverenga uchiteerera? Verenga zvinyorwa mukati Chirungu kana ChiFrench.
Chikamu 1: Nhanganyaya yeKubatanidza Gender muKuronga Mhuri
Chikamu chekutanga cheMwaka 3 yakakamurwa kuita zvikamu zviviri. Chikamu chekutanga chinopa nhoroondo uye hwaro hwekubatanidzwa kwevakadzi mumamiriro ezvinhu ekuronga mhuri. Tichatsanangura mamwe mazwi akakosha uye totsanangura zvinorehwa kana tichiti chirongwa chekuronga mhuri "chinoshandura gender." Zvadaro, vaenzi vedu vachatanga kuburitsa nyaya yekugonesa kubereka, kusanganisira kuyera sei. Chikamu chechipiri chechikamu, “Inzwi, Sarudzo, uye Chiito" chichanyura zvakadzika mukugonesa kubereka.
Mwaka wechipiri: Kuita Zvakaitika
Muchikamu chechipiri ichi chezvikamu zvitanhatu zveMukati meFP Nyaya, takabatana neWorld Health Organisation (WHO) / IBP Network kuongorora nyaya dzekuita zvirongwa zvekuronga mhuri. Inosanganisira zvikamu zvitanhatu, mwaka uno unokubatanidza nevanyori venhevedzano ye nyaya dzekuita-yakabudiswa neIBP Network uye Knowledge SUCCESS. Nyaya idzi dzinopa mienzaniso inoshanda—uye nhungamiro yakananga kune vamwe—pakuita maitiro ane simba guru mukuronga mhuri uye kushandisa maturusi achangoburwa nenhungamiro kubva kuWHO..
Unoda kuteerera zvikamu zveSeason Two? Visit the Season Two yekumhara peji uye kubata pazvikamu zvawapotsa.
Mwaka Wokutanga: Zvinhu zveFP Kubudirira
Takatanga yedu podcast yakatevedzana kukutora iwe mukati menyaya dzedzimwe dzakanyanya kubudirira FP2020 nyika. Batana nenyanzvi dzekuronga mhuri kubva kuAfghanistan, Kenya, Mozambiki, neSenegal sezvavanokurukura udzame hwepurogiramu dzokuronga mhuri, nzira yekubatanidza kuronga mhuri mune mamwe mapazi ehutano, uye kuti COVID-19 yakanganisa sei kuendeswa kwesevhisi. Chikamu chega chega chinopa maonero matsva mumaitiro akanaka, zvidzidzo zvakadzidzwa, uye kuenderera mberi kwematambudziko ekushanda kuderedza zvipingamupinyi zvinotadzisa kuwanikwa kwekuronga mhuri.
Unoda kuteerera zvikamu zveSeason One? Visit the Season One yekumhara peji uye kubata pazvikamu zvawapotsa.
Nei takagadzira iyi podcast?
Pakati pa2020, Knowledge SUCCESS hosted Regional co-creation workshops yeFP/RH nyanzvi muAsia, Africa, uye US. Vatori vechikamu vakaratidza chishuwo chenzira nyowani dzekudzidza nekugovana zvidzidzo zvinoshanda uye zviitiko zvavanogona kuwana chero kupi. Iyo inotakurika zvakanyanya uye pfupi fomati, podcasts anovhara mukaha pakati pekudzidza kwechinyakare uye kumhanya kwazvino kwekutsinhana kwezivo.